Hery Rajaonarimampianina mivady : Hanao fitsidihana ofisialy any Japon -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina mivady : Hanao fitsidihana ofisialy any Japon
Hery Rajaonarimampianina mivady : Hanao fitsidihana ofisialy any Japon
28/11/2017 admintriatra Songandina 0
Araka ny fampitam-baovao, dia hanatanteraka fitsidihana ofisialy any Japon ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny vadiny, Voahangy Rajaonarimampianina, ny 3-6 desambra izao. Ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara mivady rahateo no mitarika ny delegasiona malagasy amin’izany. Vokatry ny fifampiresahana nataon’ny Filoham-pirenena sy ny praiminisitra japoney, Shinzo Abe, tany Nairobi tamin’ny taon-dasa nandritra ny Fihaonambe iraisam-pirenen’i Tokyo, mahakasika ny fampandrosoana an’i Afrika (Ticad VI) izany fitsidihana ofisialy ataon’ny Filoham-pirenena mivady any Japon izany.
Raha ny vaovao voaangona, dia sambany ny Filoham-pirenena mivady no hanatanteraka fitsidihana any Japon. Hisy, araka izany ny fihaonan’ny Filohan’ny Repoblika amin’ireo olom-panjakana ambony any an-toerana. Noho izany, ny Emperora japoney, Akihito, no mandray ny Filoham-pirenena mivady voalohany. Voalaza fa hisy ihany koa ny fivoriana hiarahana amin’ny praiminisitra japoney, Shinzo Abe, izay handinihin’izy ireo ny mahakasika ny fampandrosoana ara-toekarenan’i Madagasikara. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisan’ny firenena roa tonta, ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha japoney, sns. Ankoatra izay, dia hisy ny fiaraha-misakafo ofisialy hiarahan’ny Filoha amin’ny praiminisitra japoney. Toraka izany koa, ankilany, ny fanasan’ny vadin’ny praiminisitra japoney ny vadin’ny Filoham-pirenena.
Tombony ho an’i Madagasikara ity fitsidihana any Japon ity. Amin’ny alalan’izany indrindra mantsy no ahafahan’ny Filohan’ny Repoblika mamelabelatra ny mahakasika ny fampandrosoana maharitra eto amintsika. Manaraka izany, ny fijerena ny fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin’ny firenena roa tonta, ary indrindra ny fijerena ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ireo mpandraharaha japoney ho amin’ny fampandrosoana.
Ankoatra izay, vahiny manan-kanja nasain’ny governemanta japoney ny delegasiona malagasy tarihin’ny Filohan’ny Repoblika mivady amin’ny fanatrehana ihany koa ny fihaonambe ara-toekarena “Madagascar-Japan Business Forum”. Noho izany, raha ny fampitam-baovao hatrany, dia hisy ny fihaonana hiarahan’ny Filoham-pirenena amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governamanta japoney. Amin’ny alalan’izany indrindra no ahafahana mijery ny fiaraha-miasa amin’ireo minisitera isan-tokony. Eo ihany koa ny mahakasika ny famatsiana, sns.